Europe bụ a smorgasbord of art, akụkọ ihe mere eme, na omenala. E nwere ka ọ na anya mgbe ahụ ka ọ bụ na-obibi na kacha mma nke ọdịda anyanwụ. na Save A Train, na ụgbọ okporo ígwè bụ ihe niile banyere ndị njem, ọ bụghị mgbe niile na-aga. Ya mere, -na na na zuru ike na-akwadebe. Nke a na-aga ịbụ a foto oriri nke kasị mma ụgbọ okporo ígwè agafe na Europe.
Ebe ike ị enwetaghị a mara mma hụperetụ si ụgbọ oloko gị window mgbe ịga Croatia. Croatia a maara nke ọma maka ya ịtụnanya na nkwusi nku ume nke ọdịda anyanwụ, wee jide n'aka na ị na- nwere gị igwefoto njikere dị ka ị na-aghaghị ịhụ Best ụgbọ okporo ígwè agafe na Europe n'oge anyanwụ dara Ebe a.
Mgbe ị na-eche Germany, ị na-eche banyere ya na-enwe ndị kasị mma ụgbọ okporo ígwè agafe na Europe n'oge anyanwụ, ma ị ga-ezigbo anya na ihe ọ na-nwere na-enye. Ị na-na-na echiche a kwa ụbọchị si English Garden na Munich. Eche cloudless mbara igwe na a mara mma obodo skyline.
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma-zochiri! na otu nke kasị mma ụgbọ okporo ígwè agafe na Europe, Ọ na-emi odude a n'ọnụ mmiri na Sardinia n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri, Italy. S'Archittu bụ a obere osimiri eme maka nanị ndị nọ mara! Isi beach bụ na-ihe na-atụ, ma jide n'aka na ị na-na obere n'ezigbo-nkume tụgbuo walkways obere gara. Ị ga-ejedebe na ihe bụ ezigbo mkpuru nke obodo: a na nkume nzu nke njiko bibiri akụkụ site mgbe nile edinam nke oké osimiri. Ma oké osimiri daa jụụ, dị ka ọ na-emekarị bụ na n'oge okpomọkụ, ma ọ bụ ike ike, ahụkarị oyi oge, anyanwụ na S'Archittu bụ mgbe a mere iji zuru ike na-ewepụta oge iji ekporopụ na.
Jide n'aka na gị na nchegbu na-enwe gị igwefoto ma ọ bụ ekwentị ngwa njikere na oge na-na ịma mma na bụ Europe mgbe anyanwụ dara. AKWỤKWỌ gị mma ụgbọ okporo ígwè agafe na Europe na anyị na SaveaTrain.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-train-rides-europe-sunset/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#europetrains	#Sardinia	#anyanwụ dara	#sunsettravel	#Tranride	#Tuscany